Nhoroondo - XGEAR
Takatanga kubva kuMarine akatevedzana zvigadzirwa nekugadzira Boat Covers, Bimini Pamusoro uye Boat Seat, uye zvishoma nezvishoma tove mutungamiri weindasitiri.
Isu takagadzira zvigadzirwa zvepanze musasa, kunyanya matende uye Pop Up Shelters inofarirwa zvikuru nevatengi.
Isu takawedzera mutsara wechigadzirwa kune giya remitambo uye takagadzira zvinhu zvekutandara zvemitambo senge tafura tennis nhevedzano.Yakatangisawo Inflatable Stand Up Paddle Board iyo yakahwina rumbidzo yakabatana.
Takaenderera mberi nemutsara wechigadzirwa chemitambo uye takagadzira Hondo Ropes yekudzidziswa kwepakati, Agility ladder seti uye Yoga akateedzana zvigadzirwa.
Isu takagadzira ekunze maChair Chair uye panguva imwe chete kunyorera yeUS yekutaridzika patent.Kune imwe, isu takasimudzira ISUP nekuvandudza nzira yekubatanidza uye kutaridzika, iyo inogara yakasimba uye fashoni.
Isu tiri kutarisa mukugadzirisa dhizaini yeMarine series zvigadzirwa, zvakare kuvandudza chimiro chezvigadzirwa zvemitambo.Mune ramangwana, isu tichagara tine shungu dzekuvandudza zvigadzirwa zviripo uye kuwedzera zvakasiyana siyana zvezvigadzirwa kuti zvienderane nemararamiro ako.